कोरोनाविरुद्धका खोप नेपालमा परीक्षण हुँदै - Samriddha Online
१विर्तामोडबाट लागुऔषध खैरो हिरोईन ब्राउनसुगर सहित २ जना पक्राउ
२कालोबजारी रोक्ने र चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना ल्याइदै
३दूधकोशी नदीमा ७० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन अनुमति
४एक हजार ५१३ सङ्क्रमीत थपिए, कहाँ कति थपिए
५अर्जुनधाराका थप दुई जनामा संक्रमण पुष्टि
६अर्जुनधारामा दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापाना पछि विचौलियाको अन्त्य
७भर्याङबाट लडेर र खोलाले बगाएर दुई जनाको मृत्यु
८संक्रमितलाई घृणा होइन सहयोग र माया गारौंः प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठ जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगा
कोरोनाविरुद्धका खोप नेपालमा परीक्षण हुँदै
समृद्ध अनलाईन ८ भाद्र २०७७, सोमबार ११:१२ मा प्रकाशित ( १ महिना अघि) ४५ पाठक संख्या
काठमाडौँ, भदौ ८ गते । खोप विकासमा सबैभन्दा अगाडि रहेको विश्वका तीन खोप उत्पादक कम्पनीले नेपालमा तेस्रो चरणको खोप परीक्षणको प्रकृया अगाडि बढाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले परीक्षणको प्रकृया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले खोप विकासको चरणमा रहेको चीनको हङ् सी, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको आष्टा जेनेका र रुसको गेमेलियाले तेस्रो चरणको परीक्षणको लागि इच्छा देखाएको जनाएको छ । हङ सीले चिनियाँ कम्पनीमा कार्यरत एक हजार जनामा खोप लगाउने प्रस्ताव गरेको छ, उसको प्रस्तावमा सम्भाव्यता र स्वास्थ्य प्रोटोकलबारे परिषद्ले अध्ययन गरिरहेको परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
खोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशिकाबमोजिम तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलका लागि खोप निर्माता कम्पनीले विश्वका विभिन्न देशमा ठूलो सङ्ख्यामा परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले रुसी खोप उत्पादकले समेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव राखेको परिषद्का सदस्य सचिव डा.ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
रुसी राजदूत एलेक्सै नोभिकभले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पहिलो चरणको छलफलसमेत गरेका छन् । मन्त्रालयले खोप अध्ययनबारे जिम्मेवारी आज मात्रै दिएको छ, भोलिदेखि अझै तदारुकताका साथ सम्भाव्यता अध्ययन र छलफल अगाडि बढ्ने डा. ज्ञवालीले बताए ।
बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको आष्टा जेनेकासँग विश्व स्वास्थ्य संगठनको समन्वयमा नेपालका अनुसन्धानकर्ता तथा चिकित्सकीय टोलीले वेबिनारमा खोपको परीक्षणबारे छलफल गरेको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले छिट्टै नै परीक्षणबारे अद्यावधिक जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
खोप उत्पादक कम्पनीले नेपाली स्वास्थ्यकर्मी, विज्ञसँगको समन्वयमा गरेको परीक्षण सफल भए नेपालले खोप पाउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
परिषद्ले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलका लागि बेलायतस्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको आष्टा जेनेका र रुसको गेनेलिया पनि इच्छा देखाएको जनाएको छ । नेपालमा खोप विकासको अध्ययन अनुसन्धान तथा परीक्षणसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
चीनको वुहान इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिक प्रोडक्ट्सको सिनोफार्म, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको आष्टा जिनेका र रुसको गेमेलिया नेशनल सेन्टर अफ इपिडिमियोलोजी एण्ड माइक्रोबायोलोजी खोप विकासमा अगाडि देखिएका छन् । गेमेलियाले भने दोस्रो चरणको परीक्षणमै खोप दर्ता गरी प्रभावकारी र सुरक्षित भएको दाबी गरिसकेको छ ।
तेस्रो चरणको परीक्षण नहुँदै गेमेलियाको उत्पादन स्पुतनिक भीको ठूलो मात्रामा उत्पादन समेत सुरु भइसकेको छ । चीन, बेलायत र रुसी तीनै खोप निर्माता कम्पनीले नेपालमा तेस्रो चरणको परीक्षणको लागि तयार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । परिषद्का सदस्य सचिव डा। प्रदीप ज्ञवाली खोप विकास र परीक्षणबारे सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।
उत्पादक कम्पनीले सफलताको दाबी गरिरहँदा विश्वका कतिपय राष्ट्रले कम्पनीसँग आपूर्तिका लागि सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । अष्ट्रेलिया, बेलायत, जर्मनीलगायत राष्ट्रहरु सम्झौतामा अगाडि देखिएका छन् । जनस्वास्थ्यविद् तथा चिकित्सकहरुले नेपालले समेत खोपको अधिकार सुरक्षित गर्न पहलकद्मी लिनुपर्ने बताइरहँदा मन्त्रालयले परीक्षणको लागि तीनै कम्पनीले प्रकृया अगाडि बढाएको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ ।
यद्यपि खोप खरिदसम्बन्धी प्रकृया बारेमा मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छैन । खोप सुरक्षित गर्न विभिन्न तीनवटा प्रकृया रहेको छ । खोप खरिद गर्न चाहने राष्ट्रले उत्पादक कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गर्न सक्नेछ । अर्को विश्व स्वास्थ्य संगठनले न्यून आय भएका राष्ट्रका लागि खोप खरिद गरी आपूर्ति गर्छ । तेस्रो, विश्व स्वास्थ्य संगठन र यूनिसेफकै अनुदानमा सञ्चालित गाभीले उत्पादक कम्पनीसँगको सहकार्यमा सबै राष्ट्रमा खोपको सामान अधिकार र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्छ ।
गाभीले सन् २०२१ को सुरुवातमै न्यून र मध्यम आय भएका राष्ट्रमा दश करोड खोप वितरण गर्ने जनाइसकेको छ । यस्ता मध्यम र न्यून आय भएका राष्ट्रको संख्या ९२ रहेको समाचार गोरखापत्रमा इश्वरचन्द्र झाले लेखेका छन् ।
विर्तामोडबाट लागुऔषध खैरो हिरोईन ब्राउनसुगर सहित २ जना पक्राउ
कालोबजारी रोक्ने र चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना ल्याइदै
एक हजार ५१३ सङ्क्रमीत थपिए, कहाँ कति थपिए
अर्जुनधाराका थप दुई जनामा संक्रमण पुष्टि
अर्जुनधारामा दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापाना पछि विचौलियाको अन्त्य
भर्याङबाट लडेर र खोलाले बगाएर दुई जनाको मृत्यु
संक्रमितलाई घृणा होइन सहयोग र माया गारौंः प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठ जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगा
झापा कारागारमा कैदीबन्दीहरु त्रासमा
बिरिङखोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि स्थानीय खुसी
मृत अवस्थामा फेला परेकी बालिकाको हत्या भएको पुष्टि
दिउँसै सुन लुट्ने लुटेरा चार दिनदेखि फरार
प्रेस क्लब मेचीनगरमा पत्रकार उप्रेती
ओखलढुंगा सदरमुकाम आज देखी खुला
अर्जुनधारामा गोरू काटेर खाने ३ जना पक्राउ